ब्ल्याकबेरीको पहिलो ‘फुल टचस्क्रिन स्मार्टफोन’ सार्वजनिक, यस्तो छ मूल्य | नेपाल आज
Friday 19 October 2018 | शुक्रबार, ०२ कार्तिक २०७५
ब्ल्याकबेरीको पहिलो ‘फुल टचस्क्रिन स्मार्टफोन’ सार्वजनिक, यस्तो छ मूल्य
मङ्गलबार, ३१ असोज २०७४ गते प्रकाशित
काठमाडौं । स्मार्टफोन कम्पनि ब्ल्याकबेरीको पहिलो ‘फुल टच स्क्रिन स्मार्टफोन’ सार्वजनिक भएकोे छ ।
ब्ल्याकबेरी मोबाइल साझेदार चिनियाँ कम्पनि ‘टीसिएल’ले यसैहप्ता दुबइको जिटेक्समा ब्ल्याकबेरीको पहिलो ‘फुल टच स्क्रिन स्मार्टफोन’ ‘ब्ल्याकबेरी मोशन’ सार्वजनिक गरेको हो । यसै महिनाको अन्त्यसम्म मोबाइल बजारमा आउने कम्पनिले घोषणा गरेको छ ।
दुई ओटा सिमकार्ड प्रयोग गर्न सकिने स्मार्टफोन ‘ब्ल्याकबेरी मोशन’मा ‘एन्ड्रोइड नूगट ७.१.१’ भर्सन रहेको कम्पनिले जनाएको छ । ‘क्वालक्वाम स्नापड्रागन ६२५ प्रोसेसर’, ‘४ जीबी रोम तथा ३२ जीबी स्टोरेज’ क्षमतालाई २ टीबीसम्म बढाउन सकिने छ ।
५.५ इन्च एचडी डिस्प्लेको रिजुलेशन ७२०×१२८० पिक्सल रहेको र स्क्रीनको सुरक्षाको लागि ‘ड्रागन ट्रायल प्रोटेक्सन’ ९डिटिजी० प्रविधि प्रयोग गरिएको छ ।
साथै, १२ मेगापिक्सल रियर क्यामराको साथ ‘फोर के’ भिडियो रेर्कडिङ गर्न सकिने छ भने फ्रन्ट क्यमामरा ८ मेगापिक्सलको रहेको कम्पनिले जनाएको छ । त्यस्तै, फोनको ‘होम बटम’मा ‘फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर’ राखिएको छ । जसबाट प्रयोगकर्ताले मात्रै फोन खोल्न सक्नेछन् ।
कम्पनिका अनुसार वाटरप्रुफ ‘ब्ल्याकबेरी मोशन’ स्मार्टफोनकोे मूल्य ४६० अमेरिकी डलर करिव ४८ हजार रुपैयाँ राखिएको छ ।
नेपाल आर्ट काउन्सीलमा भिन्टज गाडीको प्रदशनी चल्दै
आइतबार, ०२ जेठ २०७३
एप्सको जमाना अब मानिस हराए चिन्ता छैन
मङ्गलबार, ०४ जेठ २०७३
लाै अब आफ्नै आवाज र अनुहारबाट पासवर्ड ?
शनिबार, ०८ जेठ २०७३
आज विजयादशमी: मान्यजनबाट टीका-जमरा ग्रहण गरी मनाइँदै, टीकाको साइत ९:५१ बजे उत्तम
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा दसैंको शुभकामना
चितवनमा बस दर्घटनाः तीनको मृत्यु, २३ जना घाइते
प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘स्वदेशमै युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न सरकार प्रयत्नशील छ’
अघिल्लो सरकारले ढुकुटी सक्यो, कहाँबाट बढाउ वृद्ध भत्ता ? अब अर्को वर्षः प्रधानमन्त्री
‘विश्व बैंकका एजेन्ट र कमिसनखोर नेपालमा मन्त्री /अर्थमन्त्री हुन्छन्’ (भिडियोसहित)